Global Voices teny Malagasy » Ho Tanterahan’i Pakistàna Ve Ny Fandrahonany Handroaka Afghana Mpitsoa-ponenana 2,5 tapitrisa ? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 22 Novambra 2016 7:35 GMT 1	 · Mpanoratra Samea Shanori Nandika Tantely
Sokajy: Afganistana, Pakistana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Mediam-bahoaka, Mpitsoa-ponenana, Politika, Zon'olombelona
Tamin'ny voalohandohan'ity taona ity, nilazàna  ireo Afghàna maherin'ny 2,5 tapitrisa mpitsoa-ponenana mipetraka any Pakistana hoe tokony hiala ao Pakistana izy ireo ary hiverina any Afghanistana.
Nokihanin'ireo vondrona mpiaro zon'olombelona ny fanapahankevitr'i Islamabad ary nantsoiny  hoe “iray amin'ireo famerenana an-terisetra lehibe indrindra nanjo ireo mpitsoa-ponenana tato anatin'ny tantara maoderina.”
Ny taona 2002, nanao sonia  ny fifanekena niaraka tamin'ny Kaomisarià Ambonin'ny Firenena Mikambana ho an'ny Mpitsoa-ponenana (UNCHR) sy Afghanistana i Pakistana, ho an'ny “famerenana amin'ny taniny an-tsitrapo sy am-pahamendrehana” ireo Afghana mpitsoa-ponenana.
Kanefa, nanambara  ny governemanta Pakistane fa noho ireo antony fiarovam-pirenena, tsy hisy ny fanalavam-potoana amin'ity indray mitoraka ity ary tsy maintsy miverina ireo Afghana.
Nampitombo  ireo fihenjanana teo amin'i Pakistana sy Afghanistana ireo tatitra momba ireny fepetra ireny.
Araka ny  Human Rights Watch, Afghana mpitsoa-ponenana 90.000 isa eo ho eo no niverina nody  ny taona 2016 noho ny:
Nataon'ireo polisy Pakistane antsojay sy notazoniny ireo mpitsoa-ponenana ireo, nofoanan'ireo tompon-taniny ireo fifanekena fampanofàn-tany, nofoanana  ireo kaontiny any amin'ny banky sy ny karatra findainy, ary tsy navela handeha an-tsekoly sy hahazo fitsaboana izy ireo. Tsy misy fototra ara-dalàna ny amin'io hetsika famindran-toerana io.
Niantso  ny governemantan'i Pakistana hanajanona ireo “fepetra fanerena sy ireo fanararaotana hafa izay mahazo ireo Afghana mpitsoa-ponenana an'aliny avy any Pakistana” ny Human Rights Watch.
Mahatsapa anefa i Pakistana fa singanina manokana amin'ny fitsikeraina izy. Tamin'ny fandraisany fitenenana tamin'ny Fivoriana an-tampon'ny Firenena Mikambana ho an'ireo Mpitsoa-ponenana ny 19 Septambra teo, nampahatsiahivin’ ny praiminisitra Pakistane, Nawaz Sharif, ny vondrona iraisampirenena ny mikasika ny tsy fahampian'ny fanohanany ara-bola an'ireo mpitsoa-ponenana:
Raha nisaintsaina ireo fifandraisana mahamay ireo, napoakan'i  Ghani ny tahirin-kevitra momba an'i Pakistàna, tamin'ny fampiantranoany ireo mpampihorohoro izay nanao fanafihana tany Afghanistana, tamin'ny nanaovany sonia ny fifaneken'ireo ankolafy telo niaraka tamin'i Iràna sy India tamin'ny volana Septambra:
Ny volana Jiona, Bilal A. Nikyar, mpanoratra miasa ho an'ny tenany avy any Afghanistana, nanoratra  mikasika ny fomba nampiasaàn'i Pakistana ireo Afghana mpitsoa-ponenana ho toy ny “karatra” tanatin'ireo fifandraisana miaraka amin'ilay mpifanila vodirindrina amin'ny mahantra indrindra:
Ireo hafa milaza  fa ampiasain'i Pakistàna ilay kirizinà mpitsoaponenana mananontanona mba hatao fandrika amin'ireo fifanarahana miaraka amin'i Etazonia, taorian'ny namonoan'ny  drôna an'ny tafika Amerikana ilay mpitarika fahiny ny Taliban, Mullah Akhtar Mansour, tao amin'ny faritanin'i Baluchistan, ary nandàvan'ny Kaongrsy Amrikàna tsy hanome fanampiana ara-bola ho an'ilay fiaramanidina miaramila tian'i Islamabad ho vidiana.
Nanazava izao  ny mpanolotsaina iray ao amin'ny Ministera Afghana misahana ny Mpitsoaponenana sy Fampodiana an-taniny any Kabul:
Tamin'ny fivoriana  iraisam-pirenena vao haingana nataon'ireo mpanome fanampiana tany Bruxelles ny 5 Oktobra, nifamory ireo mpitondra firenena samihafa sy fikambanana iraisam-pirenena maro mba hamerina hijery ny zavabita sy ny vinan'ny governemanta Afghana ary nanavao ireo fanomezan-tokiny tamin'i Afghanistana.
Pakistana, eo an-kilany, nampanantena  500 tapitrisa dolara ho fanampiana ilay firenena tao amin'ilay hetsika. Raha mety hampihena ny fifandraisana mahamay mitombo hatrany eo amin'ireo firenena roa izany, kely dia kely ny dikan'io raha manaraka ny fampanantenàny handroaka ireo mpitsoaponenana miisa 2,5 tapitrisa (eo amin'ny 8%-n'ny isan'ny mponin'i Afghanistana ankehitriny) mbola miaina eo amin'ny faritaniny i Islamabad.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/11/22/89989/
 nanao sonia: http://unama.unmissions.org/afghanistan-pakistan-and-unhcr-discuss-voluntary-repatriation-afghan-refugees-pakistan
 Araka ny: https://www.hrw.org/news/2016/09/14/pakistan-coerced-refugee-return-endangers-thousands
 nisafidy ny tsy hanatrika : http://www.huffingtonpost.in/2016/09/28/why-indias-saarc-boycott-support-by-bangladesh-afghanistan-and/